मसानघाटमा छ मेरो देश (कविता)
खेमराज ओझा मसानघाटमा छ मेरो देश मेरो देश आज दल दलमा छ ढल ढलमा छ अनि पहिरो, बाढी र रोदनमा छ त्यसैले म भन्छु मेरो देश मसानघाटमा छ। मेरो देश शान्त छैन मेरो देशको नेता नेता हैन भ्रष्टाचारको दल दलमा …
कविता-बा म जापानमा भोकै छु
खेमराज ओझा बा म भोकैछु खाना खाको छैन बा म थाकेको छु बा मेरो रात 'रात' हैन बा मेरो निद 'निद' हैन बा मेरो खाना 'खाना' हैन बा बा म भोकै छु मेरो पसिना र रगत एउटै हो बा मेरो…
कविता–‘फरक पर्छ’–छवि ओली
छवि ओली सुन त! सुन न... सुन! एकछिन सुन नसुन्दा मात्रै तिमीले, तिमीलाई ‘साथ’ दिएका, तिमीलाई हातमा ‘हात’ दिएका र, तिमीलाई ‘माथ’ दिएका रङ्गिबिरङ्गी सपना बोकेका तिम्रो लागि हत्कडी ठोकेका हजारौं दिलहरुमा कति फरक पर्छ? तिमी एक्लैले, तिम्रो परिवारले, आसेपासे…
‘नेपाली कला-संस्कृतिमैं गरौं हामी गर्व’
बिष्णु जोशी बलिउड सिने अवार्डमा सरकार पोख्छ १ अर्ब कठै कसले बुझ्ने नेपाली कलाकारको मर्म? किन परदेश पलायन नहुँन् त कलाकार? सरकारी सहयोग छैन देशमा गरीखान कर्म। खाली घुम्यो यता–उता, ढोग्यो विदेशी राजदूत नेता बेकाम देशको ढुकुटी सक्न लाग्दैन लाज–सर्म…
कविता : हरियो पासपोर्ट
मोहनप्रसाद खतिवडा, जापान हरियो पासपोर्ट भिरेर चुहिएको छानो सम्झँदै मनभरि स्वप्निल कल्पना मुटुभरि आमाको ममता शिरमा बाबुको आशीर्वाद आँखाभरि प्यारीको झझल्को लिएर पाइलाहरू अघि बढ्न नमान्दा नमान्दै घिसारेरै आफ्नो यौवनलाई एउटा नवजवान परदेशियो हरियो पासपोर्ट भिरेर। मानौ , उ…
ठाकुरप्रसाद त्रिपाठीको कृति ‘फेवा मानुषी’ लोकार्पण
काठमाडौ । साहित्यकार तथा कवि ठाकुरप्रसाद त्रिपाठीको तेस्रो कृति ‘फेवा मानुषी’को शनिबार यहाँ एक कार्यक्रमबीच लोकार्पण गरिएको छ। ‘दीपशिखा साहित्य सङ्गम’ कास्कीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले फेवा मानुषी खण्डकाव्यको लोकार्पण गरे । खण्डकाव्यमा पर्यटकीय नगरी पोखराको मुख्य…
युवा लेखक आकाश बरालको उपन्यास ‘‘स्पर्श’’ बजारमा
काठमाडौँ । युवा लेखक आकाश बरालको ‘‘स्पर्श’’ उपन्यास अहिले बजारमा आएको छ । विशेषगरि युवा लक्षित यस उपन्यासको यथार्थपरक कथा साथै फरक भाषाशैलीले पाठकहरूको मन जितिरहेको छ । आकास बरालको यो उपन्यास पहिलो हो । उनी चलचित्र क्षेत्रमा पटकथा लेखकका…
बीबी थापाका २७ गीति एल्वम तथा २ पुस्तक एकैसाथ लोकार्पण
काठमाडौं । संभवत विश्वकै इतिहाँसमा नयाँ रेकर्ड कायम राख्दै वरिष्ठ गीतकार बीबी थापाको एकै साथ २७ गीति एल्वमहरु लोकार्पण गरिएको छ। नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति सम्माननिय परमानन्द झाले २७ गीति एल्वम एवं दुई पुस्तकको लोकार्पण गरेका हुन्। छायाँछबि क्रियशनको आयोजनामा सम्पन्न…
कविता–‘मौसम हैन उनको प्रेम’– विष्णु सिंह (बैजु)
विष्णु सिंह (बैजु) कति बादल गर्जे, कति बर्षात आए। तर न उनको खबर आयो, न उनि नै फर्के। कुर्दा कुर्दै कति समय बिते, हेर्दै रातको जुनलाई। अब त कतिपयले भन्न थाले “बिर्सी देउ उनलाई।” तर पर्वाह छैन उनलाई, कसले के…
विदेशिएको हुँ सायद म!
दीपक गौतम रौनकता अवश्य छ त्यसका बिषयमा कुनै दुईमत नै रहेन। जंजिरले बेरिएका छन् जसलाई खुला आँखाले देख्दै देखिदैन। खै कस्तो भनु परदेशी पिडा हो कि सुस्ख जसलाई बयान गर्न सकिन। लाखौं करोडौं सपनाहरूको महल ठहराई अनगिन्ती सोच हरूलाई साकार…